LibreOffice: ny fametrahana ny kinova farany amin'ny Ubuntu dia tsotra | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana ny kinova LibreOffice farany amin'ny Ubuntu
Na dia tsy Debian aza i Ubuntu dia tsy Arch Linux ihany koa. Ny tiako holazaina dia ny fahita matetika sy ny hafainganam-pandehan'izy ireo manampy ny rindrambaiko ao amin'ny toerana anaovany azy ireo: Debian dia manampy rindrambaiko voasedra tsara ihany, izay adika amin'ny kinova taloha be, ary ny Ubuntu kosa manavao haingana kokoa, saingy kely noho ny fizarana Rolling Release toy ny Arch Linux na Manjaro . Noho io antony io dia mazàna manampy dikanteny LibreOffice izay tsy ny zava-baovao indrindra.
Alohan'ny hanohizako dia tiako ny hanazava zavatra iray: raha misafidy ny hijanona amin'ilay kinova naroso i Canonical, dia ho an'ny zavatra iray izany. Voasedra tsotra fotsiny izy io ary vitsy ny bibikely. Fa marina ihany koa fa ny Document Foundation dia manatsara ny fifandanjana isaky ny famoahana vaovao, ary vao tsy ela akory izay dia gaga aho nahita fa ny ankamaroan'ny voasoratra ao amin'ny Writer dia mifanaraka tanteraka amin'ny WordPress, noho izany dia heveriko fa amin'ny tranga toa itony dia ilaina ampiasaina ny dikan-teny farany. Eto izahay dia hasehoko anao ny fomba.
1 Ny safidy tsara indrindra hanananao ny LibreOffice hatrany hatrany: ny PPA anao
2 Daty Flatpak
3 Snap version
Ny safidy tsara indrindra hanananao ny LibreOffice hatrany hatrany: ny PPA anao
Ho an'ny rindrambaiko sasany, raha ny marina, ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra dia ny fampiasana ny kinova Flatpak. Fa ny maha fonosana mitoka-monina azy ireo dia mety hiteraka olana, ka izany no antony itiavako, toa ny maro hafa, ilay antsoinay hoe "kinova APT". Raha izany no mahaliana antsika dia ny manampy fotsiny no tokony hataontsika tahiry ofisialy:
Manokatra terminal izahay.
Manoratra izao manaraka izao izahay:
Manaraka izany, manavao fonosana izahay. Raha manana LibreOffice napetraka isika dia hiseho ny fanavaozana vaovao ho fanavaozana.
Ny safidy faharoa tsara indrindra ho ahy dia ny fametrahana ny fonosana flatpak. Azontsika atao izany avy amin'ny ivon-rindrambaiko mifanaraka aminy, raha mbola alefa izy io. Ao amin'ny Ity lahatsoratra ity Azavainay ny fomba fanaovana azy amin'ny Ubuntu 20.04 mandroso. Raha manana kinova taloha izahay dia efa napetraka tsy misy hatak'andro ny lozisialy GNOME, ka tsy ilaina ny mametraka azy. Ny fametrahana fonosana amin'ity karazana ity dia tsotra toy ny fikarohana azy, mijery ny fizarana loharano, misafidy "Flathub" ary manindry "Install".
Azontsika atao koa ny mametraka ny suite araka ny nohazavaina ao amin'ny Pejy Flathub, izay miaraka amin'ny baiko terminal (apetraho flatpak flathub org.libreoffice.LibreOffice), fa maninona no toy izao raha miresaka momba an'i Ubuntu isika ary afaka manao azy io GNOME Software? Ho fanampin'izay, avy amin'ny magazay GNOME dia afaka mikaroka fonosana Flatpak koa izahay.
Napetrako ny farany amin'ireo safidy telo tsara indrindra satria aleoko ireo fonosana teo aloha. Ary koa, fonosana Snap be dia be no maka fotoana hanavaozana, na dia toa tsy toa izany aza ny olana momba ny LibreOffice. Ny fametrahana ny kinova Snap an'ny biraon'ny birao ao amin'ny Ubuntu dia tsotra toy ny fikarohana "Libreoffice" ao amin'ny fivarotana default ny rafitry ny fandidiana, satria "Snap Store" raha ny tena izy dia tsy omeko soso-kevitra mihitsy, fa tsara ho an'io.
Raha toa ahy ianao dia tsy te-hikasika an'io fivarotana io mihitsy, ary raha nametraka rindrambaiko GNOME ianao dia azonao atao koa ny mitady azy ao amin'ity magazay ity ary misafidy ilay iray izay nilaza hoe "snapcraft.io" tany am-boalohany. Ary raha ny tianao atao dia ny manao azy amin'ny alàlan'ny terminal, dia tsy maintsy manoratra ity baiko ity ianao:
Araka ny efa nanehoako hevitra dia aleoko manao izany amin'ny tahiry ofisialy, ary mieritreritra aho fa tsy izaho irery, fa ny iray amin'ireo safidy telo ireo dia tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fametrahana ny kinova LibreOffice farany amin'ny Ubuntu
Baska dia hoy izy:
Ny fonosana mitoka-monina dia mety hiteraka olana, tsy izany, raha tsy misy flatpak dia tsy hisy olana iray akory, na dia iray monja aza no ampiasainao amin'ny rafitra iray manontolo, inona ny hadalana tsy maintsy hitanao.
Mamaly an'i vaserqueno
Tsy mitovy ny miasa rehetra, misy ny fanitarana izay tsy misy, mety tsy hitovy ny endrika ...
Eny, azo atao izany.
Ho vitantsika ve ny hisintona ireo rakitra mankany amin'ny birao Ubuntu 21.04? Ny fahatongavan'i DING ao amin'ny Daily Build dia mahatonga antsika hieritreritra an'izany
Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny pendrive miaraka amin'ny fitehirizana maharitra amin'ny fomba azo antoka indrindra noho ny GNOME Boxes